Recycle Bin Recovery - Ladnaansho tirtiray Faylal ay ka Recycle Bin
Dib u Bin aad kombuutarka
Sidee inuu ka soo kabsado files tirtiray ka Recyle Bin?
Sida loo soo celiyo files tirtiray ka dib markii faaruqinta Recycle Bin
Kabsado files ka dib markii ay tirtirto ka Recycle Bin - Free Solution
e Kabsado files ka dib markii ay tirtirto ka Recycle Bin - Xalka wax ku ool ah
Talooyin dheeraad ah ka dib markii uu soo kabashada xogta
Recycle Bin on Windows waa sidaas oo kale ah "Trash" on Mac, meel it`sa meesha files tirtiray ku kaydsan yihiin kiis kasta oo iyaga ka mid ah ayaa la kac ahayn tirtiray ka kombiyuutarka. Waannu karaynaa inuu ka soo kabsado xogta ka Recycle Bin haddii aan haven`t waxaa loo madhiyo ama Tuur files aad u tiro badan u galeen in ka badan xadka bannaan ee.
Dabcan xadka meel Recycle Bin waa hagaajin karo - size sida caadiga ah waa 10% ka mid ah 40GB hore iyo 5% oo ka mid ah kootada kasta oo kor ku xusan 40GB (waxay ku xiran tahay Windows OS version), haddii aad rabto in wax laga beddelo, aad awooddo guji -right ku icon Recycle Bin on desktop ka dibna dooro "Guryaha" ka menu, ka dibna waxaad arki kartaa fursadaha dejinta size Recycle Bin`s iyo goobta (sida caadiga ah ee Hard Disk C). In kastoo aad xor u tahay dhigay size ee Recycle Bin, It`s aan weli talinayaa inay ka sameeyaan in ka badan 50% ka mid ah digsi C, ama it`ll isticmaalaan ilaa iyo aad u badan meel orodka ee habka iyo hoos your computer.
Sida caadiga ah files aad tirtirto ka desktop ama partions drive adag weli waxaa laga heli karaa in Recycle Bin, waxaad u baahan tahay oo kaliya in la helo dooro faylasha aad rabto in aad u soo kabsadaa Recycle Bin, ka dibna midig guji oo ka dhacay "Soo Celinta" in menu . Files ayaa ku laaban doonaa meesha ay ahaayeen. Oo kanu waa habka ugu fudud oo ugu badan ee soo kabsaday files tirtiray.
Sidee inuu ka soo kabsado Recycle Bin tirtiray files
Ka dib markii aan si qalad ah tirto faylasha muhiim garaacida ah "Delete" button, waxaa laga yaabaa in aynu eegno iyagii Recycle Bin. Marar badan, waxaan ka heli doontaa files tirtiray gal in, laakiin waxa haddii Bin Recycle la madhin ka dib markii Kabcada_? Ma waxa ay ka dhigantahay faylasha / data yihiin si joogto ah u tegey?
Jawaabtu waa "MAYA" - habab xaq iyo in yar oo nasiib ah waxaan mar walba u hesho dib waxa aan laga badiyay, haddii aan tirtirka la sameeyey waqti aad u dheer ka hor waayeen;
Marka aynu ka shubeen Recycle Bin, faylasha waxa ku jira la waayay, laakiin dhab ahaantii Markay dhinteenna, lama saaro computer weli - xogta weli jirey on disk adag qaabab cayriin. Waxay halkaas sii joogi doono ilaa ay wada overwritten by xog cusub. Ka hor in aan mar walba fursad u helaan inay soo saaro iyo kuwa la soo celiyo. Iyo that`s waxa xogta soo kabashada qalab nagu caawiyaan in la sameeyo.
Ka hor inta fulinteeda u soo kabashada xogta ka ah recycle bin ka shubeen , waxaan u baahan nahay:
An software wax ku ool ah soo kabashada xogta
Jooji tuuraya wax file cusub Recycle Bin
Samee sida ugu dhakhsaha badan si loo kordhiyo fursada ay ku soo kabsado si buuxda
Xalka 1: qalabka Free inuu ka soo kabsado ka dib markii files tirtirto ka Recycle Bin
Recuva waa aalad kabashada file miisaanka yar oo lacag la'aan ah daaqadaha. Waxaa laga baarayo doonaa cajaladaha ku on your computer ka dibna soo bandhigaan faylasha dhawaan tirtiray in liiska. Waxaad awoodaa inaad hubiso doonaa xiisaha faylasha waxay ku calaamadeysan yihiin haddii recoverable.
Habka iskaanka ayaa waddaa soomi, oo ii soo jiitay markii I`m sameeyo baaritaanka iga hore. Laakiin natiijada iskaanka ka soo baxday in ay xoogaa niyad - ma files badan oo laga helay oo kaliya 1/3 ka mid ah lagu soo kabsaday laga yaabaa. Mid kasta oo ka mid ah cajaladaha la dooran lahaa geeddi-socodka u gaar ah scan, laakiin waxaa jira wax aan u ah scan Recycle Bin (aad u baahan tahay in nooca in "\_ $ Recycle.Bin" in bar raadinta ah in la sameeyo waxa keliya oo laga baarayo Recycle Bin)
In eray, Recuva waa si degdeg ah, miisaanka yar oo si sahlan loo isticmaali, laakiin la'aanta hawlaha sare dheeraad ah iyo xad xumo soo kabashada-qualtiy waxa aan la isku hallayn ka dhigaa. Weli Waxaad heli kartaa isku day ah haddii aad raadinayso freeware ah qaab macquul ah.
2 PC soo kabashada file Isbatooraha
Kabashada file PC Isbatooraha sidoo kale waa freeware ah u soo kabsaday files laga badiyay. Waxaa soo kaban karto xogta aad xataa marka drive ay ku adag tahay wax yar oo burburay oo mar dambe recoginised in BIOS. In baaritaan aan, waxay muujinaysaa succes heerka la aqbali karo ee soo kabsaday files tirtiray ka Recycle Bin iyo qaybaha kale ee drive ee adag. It`s function soo kabashada gaarka ah sidoo kale taageertaa DOC, XLS, HTML, EXE, JPG, MP3 iwm - wadajir 25 nooc file caadi on Windows, oo waa in ku filan freeware ah. In kasta oo dhammaan sifooyinka wanaagsan, habka iskaanka ka socday badan muddo ka badan waxaan filayaa (oo mararka qaarkood in ka badan nus saac oo ay jiraan wax badan oo si scan).
Gunaanad: Isbarbar in qalab kale oo lacag la'aan ah, kormeeruhu PC ayaa soo kabashada tayada xoogaa ka wanaagsan oo wuxuu siiyaa kaalmo dheeraad ah oo formates xogta, halka habka iskaanka gaabis ah dib ugu heerka celceliska waxay keentaa.
Xalka 2: hab wax ku ool ah inay ka soo kabsadaan files ka dib markii ay tirtirto ka Recycle Bin
Haddii mid ka mid ah ayaa raadineysa software ah effecitive leh file noocyada taageero, si dhakhso ah xawaaraha iskaanka, si qoto dheer iskaanka qoto dheer iyo soo kabashada qualtiy fiican. Wondershare Data Recovery waa in doorasho wanaagsan. Waxay bixisaa saddex hab kabashada (file lumay Recovey, ceeriin Recovery iyo Soo-kabashada Barzakh) in ka badan 550 qaabab xogta, taas oo ka mid ah ku dhowaad dhammaan noocyada file ah (oo ay ku jiraan waraaqaha, sawiro, videos, farriimo Cajalado & email iyo archives iwm) kombiyuutarka.
Marka laga reebo ka bin Recycle, waxa ay sidoo kale soo celin karaa xogta ka kaararka xusuusta, drives adag, redrives saari karo, flash drives, digital camera / fiidiyo iyo telefoonnadii.
Si aad u soo ceshano waraaqaha lumay, sawirada, videos, Cajalado, archives iyo wax kasta oo noocyada kale ee files ka Recycle Bin, waxaad kala socon kartaa tallaabooyinka hoose iyadoo la kaashanayo Wondershare Data Recovery:
Tallaabada 1 Dooro nooca file u soo kabashada
Halkan waxaad ka dooran kartaa nooca file in aad doonaysid in aad ka heli bacl, sida sawiro, files audio, videos, waraaqaha iyo email ah. Oo weliba waxa kale oo aad dooran kartaa oo dhan haddii aad dooneyso inuu ka soo kabsado dhammaan faylasha aad laga badiyay. Just hubi mid ka mid ah.
Tallaabada 2 Dooro inuu ka soo kabsado Recycle Bin
Si aad u soo kabsado files tirtiray ka recycle bin, waxaad halkan ka eegi kartaa "Recycle Bin", kaas oo kaa caawin kara in ay baadhaan dhammaan faylasha tirtiray ka Recycle Bin.
Tallaabada 3 kabsado tirtiray files ka Recycle Bin
Marka iskaanka ka baxayo, waxaad awoodi doontaa in ay ku eegaan natiijada scan, kaas oo lagu tilmaamay inay galeen nooc. Fiiri kuwa faylasha aad rabto in aad soo kabsadaan oo ka dhacay on "Ladnaansho" in ay dib u hesho.
Marka aad laakiin kama ay helin xogta aad doonayso inaad dib, waxaad dooran kartaa baaritaan qoto dheer ama qaab kale oo soo kabashada in ay mar kale ku soo ceshano.
Macna ma laha inta aad ka Recycle Bin soo kabsaday faylasha aad, raac talooyinkan si loo xaqiijiyo ammaanka data`s oo muhiim ah:
Dib aad files muhiim ah si taxadar leh
Save the files soo kabsaday on xijaab kale duwan ka hadlo xijaab isha si looga fogaado overwriting xogta.
> Resource > Ladnaansho > Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Faylal ay ka Recycle Bin